Home Wararka Dowladda Federaalka oo Aqbali La’a Go’aanka Reer Punland ee Doorashada.
Dowladda Federaalka oo Aqbali La’a Go’aanka Reer Punland ee Doorashada.
Xildhibaanada reer Puntland ayaa maalintii shalay ahayd waxay sameeyeen doorasho cadaallad ahayd oo ay ku doorteen Madaxweynah Dowlad goboleedkooda, kaas oo ay is leeyihiin waxaa uu ka shaqeyn doonaa danta ummadda muuddada 5ta sano ah ee soo socota, hasa yeeshee dowladda Federaalka oo ku qanci la’ inay reer Puntland diideen gacan ku riminteeda ayaa hadda ku bilowday rabshado ay rabto inay ku dumiso hooyadii Fedraalka,sida waxa laga sameeyey Burtinle iyo Boosaaso oo ah qeybi oo xukun.
Reer Puntland, kadib taarikh dheer oo doorashooyin ah, ayey waxay garteen in Dr. Siciid Cabdullahi Deni uu yahay shakhsiga hogaamin kara Puntland xelligaan kala guurka ah oo uu dalka Somaliya gebi ahaanba khater ku sugan yahay, Puntlandna u baahan tahay inay noqoto hogaan tusaale fiican ah Jamhuuriyadda inteeda kale.
MW Siciid Deni waa aqoonyahan, xoolo leh oo aan u baahneyn inuu wax dhaco, wax badan oo wanaagsanna ka soo qabtay Puntland iyo guud ahaan dalka oo dhan oo waxaa uu ka mid raggii waxbarashada gobolladaas u saldhigay, isla markaana abuuray dugsiyo ay dad badani ka aflaxeen.
Dhinaca kale waxaa uu shaqo wanaagsan ka qabtay heer Federaal oo waxaa uu ahaa Wasiirkii Qorsheyna Qaranka. Intii uu wasiirka ahaa waxaa lagu amaanaa inuu ahaa shakhsigii wax badan ka qabtay u saldhigidda Tiirarka ay u shaqeyso wasaaradda Qorsheynta Qaranka oo hadda marin habaawday, kadib markii uu lumay wasiir Jamaal oo igu sawir ka bixi la’.
Doorashadaii Shalay waxaa amaanteeda leh dadka reer Puntland iyo MW hore ee Puntland oo ka xeray dhammaan daaqad kasta oo ay ka soo gali karaan kooxda u tafaxeydan burburinta dawlad goboleedyada kuwaas oo ah kooxda Madaxtooyada Somaliya ku urursan oo lacag iyo shakhsiyaad wax kharribaa u diray Puntland.
Dawladda Federaalka waxay rabtay inay halkaas ka sameyso wixii ay Badhabo ka sameysay oo ahaa inay soo xerto musharrixa dadka ay rabeen una saarta mid ay iyadu wadato oo ahaa wixii uu MW Farmajo ka sameeyey K/Galbeed oo mid uu abti u yahay la dul saaray reer K/Galbeed.
Hasa yeeshee, mahadi haka gaartee reer Puntland waxay muujiyeen biseyl siyaasadeed waxayna doorteen ciddii ay u arkayeen inay ka soo dhalaali karto danta guud ee dalka, gaar ahaan tan Puntland waxaana ay ku towfiiq sadeen Dr. Siciid Dani oo aan leenayahay Hamablyo.
Dhinaca kale, waxaan dadka rabshada abaabulayaa kula talineynaa inaysan iska gubin dalka oo ay fahmaan in kooxda wax hurineysaa ee Xamar uu waqtigeedii dhammaaday gabbalkiina uu udumay laakiin reer Puntland uu waa cusub hadda u baryey oo haka qeybgalaano horumarinta gayigooda.
Dadka reer Boosaaso iyo Burtinle ha garteen waxa loo wado oo ah in lageeyo ciidan Erateriyaan ama Itobiyaan ah, haddii rabshadaha ay sii socdaan oo yeysan marmarsiiyo u sameyn Madaxtooyada Xamar.
MW Deni waxaa laga rabaa inuu ilaaliyo distuurka, xeerarka iyo dhaqanka suuban ee dadka doortay. Sidoo kale waa inuu gacan bir ah ku qabtaa kooxa yare ee qaswadayaasha ah inta aysan xogeysan si sharciga loo horkeeno, taas oo badbaado u ah Puntland iyo guud ahaan dalka.
Sidoo kale MW Deni ha fekero tallaabo saxan oo uusan dhiig kale oo walaal Somaliyeed mar kale uusan ku daadan dagal beeleedka Tukaraq ee la siyaasadeeyey. Waxaana laga rabaa inuu noqdo shakhsi kharaar yar u liqi kara si loo baajiyo mid ka weyn oo uu ogaado in kibir iyo qab siyaasadeed uusan wax badan ku gaareyn waxayna arrintaan u baahan tahay hogaamin caqli ku dhisan iyo ka fiirsi loo talo badsado.